Sookoofi soorgoo diraamaa 'Min Littaazaz' - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Dire Tube
Itoophiyaa keessatti diraamaawwan qabiyyee hawaasummaafi siyaasa irratti xiyyeefatan hedduun yeroo garaa garaatti afaan Amaaraatiin dhiyyaachaa turaniiru. Kanneen akka baala guddaay, maan gadalaat, gamanaa, beetoch fi kan biroos diraamaawwan qeequmsa haala yeroo irratti xiyyeeffatan keessaayi.
Diraamaawwan kanneen waa'ee hawaasummaarratti kan xiyyeeffatan yoo ta'u, diraamaan Min Littaazaz garuu qeequmsa siyaasaa irratti kan xiyyeeffate fakkaata.
Diraamaan kunis darbuu kan eegale tibba mormiin magaaloota biyyattii adda addaa keessatti cimuun, kallattiin adeemsa siyaasa biyyatti adda hin bahiniitti ture.
Eddoon diraamaan Min Litaazaz itti hojjatamus kaaffeedhuma tokko. Haati kaaffichaa Aaddee Lamlam yoo ta'an, kan ogganamu garuu Obboo Ayaaliqibbatiin.
'Egereen fiilmii Afaan Oromoo abdachiisaadha'
Imala baaburaa 'jeeqamaa' magaalaa Mumbaay
'Fiqaaduun lafa xabalaatti yaalamaa ture'
Hoogganaan kaaffee kanaa Obboo Ayaaliqibaatis keessummeesitoota isaa Iddil, Nigusneshiifi Daggisawu naannoo adda qooduun akka hojjataniif ramadeera. Haala 'addunyaa Kaaffee' kanaas kanneen haala qabatamaa Itoophiyaa waliin walitti hidhan jiru.
Natsaanat Tasfaayee fi Taammanaan yeroo mijateef hunda diraamicha ni dowwattu. Diraamichis haala biyyatti hordofuun qeequu cimaa akka taasisu amanu.
Barreestaa ta'uun kan hojjatuu namichi areeda dheeraa Daanyeen, gurbaan gaazexaa naanneessu Suudaan, Dura taa'aan paartii Lixi, Carboollee, barreessaan diraamichaa Dooniisii fi hojjattoonni baankii sadan taatoota diraamaa kanaati. Taatoowwan kan biraa yeroo garaa garaatti mul'ataniifi maamiltoonni kaaffechaas jiru.
Taammanaan garuu taatoota kanneeniin baayyee aara. Maaliif jennaan, 'taatoonni natti lallaafu' jedha.
Dhimmoonni torbaniin kaaffecha keessatti ka'an hundi siyaasa. Haala baaccoo fi kolfa fakkaatuun doowwattootaaf dhiyaatu.
Diraamaa kunis TV Faanaatiin tamsa'unsaa namoota tokko tokkoof gaaffiidha. Taammanaan akka jedhuutti, haala hawaasa keessa jiru dhiyeessuun alatti ergaa cimaa hin qabu. Natsaannatis yaada isaa kanaan walii gala.
Akkasumas diraamaan kun mata duree haasaa namootaa ta'usaa irratti waliigalu.
Itti gaafatamaan Biiroo Aadaafi Turiziimii Finfinnee fi Yunivarsitii Finfinneetti barsiisaanTiyaatiraa kan turan gargaaraa Pirofesaraa Nabiyu Baayyee, haalli qeequmsa siyaasaa diraamaa Min Littaazaz kunis diraamaa fi tiyaatira Itoophiyaatiif waan haaraa miti jedhu.Tiyaatirri yeroo jalqabaatii Itoophiyaa keessatti hojatame ture qabiyyee siyaasaa akka qabu himu
Tiyaatirri biyyattii jalqabaa Taklahaawaariyaati Taklamaariyaamiin barreeffamees 'Ye awurewochi komodiyaan Masaalaq' yeroo tokko caalaa agarsiifamuuf carraa akka hin argatiin barsiisaa Zarihun Birhaanu ni dubbatu. Sababiinsaas aanga'oonni yeroo sanaa qabiyyee diraamichaan waan hin gammadiin hafaniif jedhu.
Diraamaadhaan qeequmsa dhiyeessuun Itoophiyaatti waan haaraa akka hintaane lamaanu walii galu. ''Itoophiyaa keessatti qeequmsa siyaasaa haala Kanaan dhiyeessuun waan haaraa miti'' kan jedhan Pirofesar Nabiyuun, haala dhoksaatiin dhiyeessuun ammoo aadaa ogbarruu keenyaati jedhu. Obbo Zarihuun ammo 'Min Littaazaz' dhugaa qaba. Akkasumas bareedinas qaba jedhu
'Diraamaa Min Litaazaz 'abbaa Ilkaanii'
Diraamaan torbeen Dilbata sa'aa booda dhiyaau kunis dhimmoota waqtaawaa ta'aan hordofuun qeequuf carraa argateera.
Fanaatti qopheessaa mummee sagantaalee bashannanaafi Itti gaafatamaan kutaa sagantaalee waltaatotaa Obbo Zakaariyaas Birhaanu, yaadni diraamaa 'Min Litaazaz' gara biiroosaanii yoo geeffameetti kaayyoonsaa dhimmoota siyaasaa qeequu ta'usaa ni yaadatu. ።
Sababiiwwan diraamaan kun jaalatamummaa ittiiin argachuu danda'e keessaa tokko TV namoonni baayyee ilaalan Faanaan tamsa'uun darbuusaati jedhu gargaaraan pirofesaraa Nabiyuun.
Obbo Zariyuun gama isaanitiin, diraamichi dhimmoota 'hinxuqamneedha' jedhaman kan xuqeedha jedhu. Baroota 40 fi 60 darban keessa oggeeyyonni dhimma siyaasaa biyyattiitti bu'an hedduun baqachaa, fi dhiibbaa jalatti kan kufan hedduu ta'uu eeraniiru.
Wayita ammaa kanattis TVn namoota baay'een ilaalamaa waan jiruuf, 'Min Littaazaz' bakkeewwan garaa garaatti ilaalamuuf carraa agateera kan jedhan Pirofesar Nabiyuun, dandeettii barreessitootaas dinqisiifataniiru.
Haala qeequmsi cimaan ittiin dhiyaatu sirriitti beekaniiru kan jedhan pirofesarri kun, kanaafis qooddattoota diraamichaa eeruun himu.
Qooddattoonni dhaabbataa ta'uun amallisaaniis beekamuun yeroo hunda waan garaa garaa dhiyeessu. Obbo Ayaalqibbat, Carbollee, Daanyee, naanneessan gaazexaa Sudaan amala isaanitiin ni beekamu. Amala isaanitiinis nu kofalchiisu.
Obbo Zarihuun akka jedhanitti, dowwataanis dubbiifi gocha qooddattootaan kolfuun alatti osoo ergaasaanii hin dagatin yeroo dheeraaf kolfa.
Humni diraamaa kanaas kan maddu kofalchisuu ykn qeequusaan qofaan osoo hintaane, taateewwan yaadataman torbaniin dhiyeessuu isaatiin ta'uu ogeessonni lamaanuu irratti walii galu.
Haala moggaassa maqaa qoddattootaa keessatti, Liixi (Limaataawwii ximrat) fi Carboollee (Carqoofii hanga Boolee) ni mul'atu jechuun himu.
''Humni diraamichaa kofalchiisuu otoo hin taane, qeeqa kennuu dha'' kan jedhan gargaaraa piroofeessarri Nabiyyuu Baayyee 'itti kofallee akka irraa barannuufi jedhu''
Obbo Zarihuun yeroo jalqabaa siyaasa qofa osoo hin taane kan hawaasummas akka qeequ dubbatu. Siyaasni yoo geeddaramu qabiyyeen diraamichaas jabaachaa dhufee jedhu.
Diraamaan walitti fufaa kofalchiisaa akkasii amala dhimmota waqtii qeequu qaba. 'Min Littaazazis kana milkeesseera' jedhu.
Ejjennoon barreessitootaa kabajamuu qaba,''hojjechuu kan barbaannu dhimma siyaasaa irratti qoosuu dha yoo jedhan kabajuu,'' qabnas jedhu. Hojjetaan Faanaa Biroodkaastiing Koorporeet yeroo siyaasni jabaatu jabeessanii qeeqquu malu jedhan.
Ogummaan akka hiikani dha
Obbo Zarihuuniif qooddattoonni akka galtuuttis tahe akka ijootti barreefaman unuun fakkaataniifi bakka bu'aniitu kaafaman.
Gargaaraa piroofeesarri Nabiyyuun immoo 'Min Littaazaz' addunyaa uummata Itoophiyaaf tahu haa uumaniyyuu, dhimmi ilaalan kan Afrikaafi addunyaa irratti tahu dha.
Qooddattoonni kunneen nama addunyaa isa dhugaa keessa jiru wajjin wal-fakkeenyaan dhaabbatan waan jedhutti walii hin galan.
Inni gaazexaa gurguru har'a gaazexeessaa abaluu jedhamu yoo fakkaate, bor immoo isa kaan fakkaata. Yeroo itti aanutti isa kaan fakkaata. Inni aktivistii fakkaatus amalli qooddattummaa isaa ni geeddarama.
'' Yaada paartilee wal mormaniifi aktivistii bakka bu'anii kan barreeffamanii dha malee waraabbii nama tokkooti jedhee hin amanu'' jedhu piroofeesarichi.
Obbo Zarihuun gama isaaniin daaawwataan hiika mataa isaa kennuuf carraa akka qabu irraanfachuu hin qabnu jedhu. Akkuma yaadni gaarii kennamu hiika sirrii hin taane argatee dhagahuu akka dandeenyu kaasu.
Namooti diraamicha irratti hirmaatan qaamota naannoo tokko bakka bu'ani dha jechuun hin danda'amu jedhu gargaaraa piroofeesarichi.
Namooti gargaagaraa qeeqaafi leellisa isaanii qabatanii gara waajjira isaanii akka dhufan himu'' akka daawwataa kuni kana fakkaata jechuun ulfaataa dha'' jedhu
Diraamichi qajeelfama Televizyinii Faanaa waliinis akka walitti hin buune obbo Zarihuun ni dubbatu.
Qooddattoonni 'Min Littaazaz inni tokko isa kaanirra addatti waan bocamaniif yaadi haasa'anis adda adda dha.
Kunimmoo daawwataan sirriitti akka isaan adda baasuufi wal-dhabdee uumuun diraamicha warraaqsuuf gargaareera.
Xiin-sammuu,namuusaafi haalli hawaasummaa qooddattootaa sirriitti waan mul'atuuf daawwataan nama dhugaa wajjiin isaan wal fakkeeessa. Kunimmoo fakkiin qooddattoota kanaa sirriitti waan kaafaeefi jedhu.
Kolfaa alatti daawwataan maal buufata?
Diraamichi barsiisaaf hin qophoofne kan jedhan obbo Zakkaariyaas, bashannansiisuun alatti jireenya siaaysaa, hawaasummaafi diinagdee irratti waa kaa'ee darbuu kan kaayyefate dha.
''Ogummaan sammuu namaatti hasaasuun gadi bahanii dhakaa darabachuufi daawwitii caccabsuutiin lubbuu balleessuurra dubbiin akka sirratuuf carraa kenna'' jedhu piroofesarri gargaaraa. Otoo kolfinuu barannas jedhu ogeessoti kunneen.
'Min Littaazaz' oduu siyaasaa biyyattii keessa har'a tahu boru kolfaaf qopheessa. Dhimmoota miidiyaa hawaasummaa irratt dubbii ijoo tahan ogummaan sukkuumeefi bareechee dhiyeessa. Bilisummaa akkasii eessaa fide?
Bilisummaan ogummaa, bilisummaa yaada ofii ibsachuu wajjiin wal qabataa dha. Kunimmoo heeraan kan hayyamame dha. Dur sababii garaagaraan itti fayyadama hin turre amma immoo namni waa dubbatte jedhee irree sitti agarsii du gatii hin jirreef itti fayyadamaa jirra.
Obbo Zarihuun diraamichi addaan cituufi waan jedhu dhageenyeerra ''garuu Faanaan yaada keenya bilisaan dabarsuuf kan dhaabbate dha. Kanaafimmoo diraamaawwan keenyi ragaa dha.'' Jedhu.
Obbo Zakkaariyaas diraamaawwan karaa raadiyoo darban irratti akka mari'ataniifi, qopheessitoota diraamaa 'Min Littaazaz' waliinis deebii uummataa irratti akka mri'atan himu.
Piroofeesarri gargaaraa Nabiyyuu ''diraamichi gara dhimma hawaasummaa yookiin diinagdee tokkotti akka hin jigne yoo ilaaltu qopheessitoonni beekumsaan akka hojjetan beeksisa'' kalaqa isaanii dinqisiifatu.
Muuxannoon barreessitootaafi qopheessitoottaa jaalatamuu diraamichaaf shoora olaanaa akka qabu kan himan immoo obbo Zakkaariyaasi dha.
Yaada irra deddeebii tahe akka araganiifi diraamichi akkuma rakkoo hawaasummaa argu namoota dhuunfaa irrattis otoo xiyyeefatee gaarii dha jedhu piroofeessarri gargaaraa Nabiyyuu.
Obbo Zarihuunis dhimmooti siyaasaa baay'achuu isaanii dubbatu. Yaada gegeeddaruun barbaachisaa dha jedhu.
Miixuu: Hojii egereen fiilmii Afaan Oromoo abdachiisaa ta'uu akeeke
Haasaa, sirbaa fi diraamaa: Jireenya imala magaalaa Mumbaay
Obboleessa: Fiqaaduun sooma Filsataa booda Finfinneetti deebi'uuf ture
Jaldeessi birrii walakkaa miliyoonaa ol nyaate qoratamaa jira
Ilaalchoota waa'ee dhiiga arjoomuurratti jiran
Pirezedantiin Suudaan aangoorraa kaafaman malaamaltummaan himataman
Miseensi paarlaamaa 'hirriyyaasaa dubartii' kabaluusaatiif to'atame